प्रियतमाको नाममा – यौटा कविता
शेखर विकल्प, (काठमाडौँ)
साँच्चि – बिश्वासै नहुँदो त यो संसार र
दुनिया कसरी चल्दो हो हँ ?
बाटोको किनारै किनार भएर बगेको छ नदी,
र चुर्लुम्म डुबेरै गंगास्नान गरेका छन मान्छेहरु..
के पानीले मान्छेलाई मुक्ति दिलाउँछ ?
छ गाउँमा सबैको गुनासो उस्तै-
सखाप भईसक्यो सहर - पाश्चात्यको डढेलोले !
के ठेगान त्यो हुरी भोलि यहि पो आईपुग्ने हो कि ?
आमा, बा भन्दै थिए - तँ सहरिया नबन्नु है बा..
महिना नपुग्दै गिध्दका झैँ आँखा तेर्साएर
घर बहालको घण्टि बजाउँछन घरबेटि ।
नुन, चामलको पैसो नतिरेको महिनौ भइसकेछ,
उफ.. कुन गल्लि छिरेर बाहिर निस्कनु ?
सोध्न मन थियो एकदिन
क्याम्पस, पाठशाला हो या प्रदर्शनीगृह ?
बिद्यार्थीहरु आउँछन प्रतिस्पर्धा गर्न – बिद्याको या धनको ?
र मास्टरहरु बेच्छन शिक्षा या बिज्ञापन ?
सहर त - अभावहरुको संग्रहालय पो !
देशमा सत्ता बद्लिन्छ मौसम जस्तै – कैले घाम त कैले पानी,
बिचरा जनता – आश गरुन सत्ताको
वा खोजुन ओत - छहारी ।
हुलाकी दाइले अस्ति मात्रै पत्र थमाएथे,
लेख्दै थिईन प्रियतमा – निष्ठूरी,
माया भन्ने त थोपो छैन है तिम्लाई !
माया नै नभएको कोहि मान्छे होला र,
के जवाफ दिउँ खै,
कुन बिश्वास खोपेर प्यारमा !
सपना, आश्वासन या बिवशता ?
सोच्दा हुन दलानबाट लामो सास फेर्दै,
बाटो भरी आँखा ओछ्याएर –
अब त छोराले पनि घर खर्च चलाउनु पर्ने ?
तर , बा लाई कस्ले भन्दिओस –
छोराको सर्टिफिकेट पैसा छाप्ने मेसिन हैन भनेर !
कालो बादल थियो आकाशै ढाकिने गरी,
कतिपल्ट हेरीरहुँ लाग्ने नचाहेर पनि !
हराउने हुन खै कत्तिखेर ?
न बर्षिन्छ पानी बनेर - न उघ्रिन्छ आकाश छाडेर,
मान्छे भित्रको बेदना जस्तै ।
तै.. कहिलेकाहि देखिने काला बादलका सेता घेरा हेरेर,
प्रियतमालाई यौटा पत्र कोरौं लाग्थ्यो ,
स्वर्णिम सपना भित्र सुनौलो गुलाफ फुलाएर,
र बा आमाका अलिना सपना कोरेर ।